Imaaradka Carabta oo ka hadlay dilkii Maareyihii shirkadda P&O Paul Anthony Formosa – Radio Daljir
Imaaradka Carabta oo ka hadlay dilkii Maareyihii shirkadda P&O Paul Anthony Formosa
Febraayo 9, 2019 1:06 g 0
War qoraal ah oo goor dhawayd ka soo baxay wasaarada arimaha gudaha ee dowladda Imaaradka Carabta ayaa waxaa lagu sheegay in ay si dhaw ula socdaan xaalada shaqaalaha Shirkada P & O Ports ee hoostagta Shirkadda DP World ee ku sugan dekeda Bosaaso.
sidookale qoraalka ayaa lagu sheegay in ay si dhaw ula socoto wasaarada baaritaanka meedka Maareyihii shirkadda P&O Paul Anthony Formosa oo kujira Isbitaalka weyn ee magaalada Bosaaso.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Puntland waxa ay ugu baaqday in ay si foojigan uilaaliso amniga shaqaalaha shirkada P & O Ports ee ku sugan magaalada Bosaaso ,si mashruuca balaarinta dekeda Bosaaso ay uga faa,iidaystaan shacabka Puntland .
Warkan ka soo baxay wasaarada arimaha gudaha ee dowladda Imaaradka Carabta ayaa ugu dambayntii waxaa lagu sheegay in loo midoobo sidii meel looga soo wada jeesan lahaa falalka guracan ee Argagixisada ay ku beegsanayaan madaxda shirkadaha caalamiga ah iyo shaqaalaha ajnabiga ah .
Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay Addis Ababa (Sawiro)